Shirka Madasha oo Maalintii Labaad ka Socda Baydhaba
Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda xubnaha ka ah Madasha qaran ee Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ayaa mar kale maanta kulan ku yeeshay magaalada Baydhaba oo maalintii labaad uu shirka madasha ka socda.
Waxyaabaha maanta shirka diiradda lagu saaray ayaa waxaa ka mid ah hannaanka doorashada 2016, guddiyada doorashada, maalgelinta iyo saadka doorashada, qoondada 30% ee haweenka ay ka helayaan goleyaasha qaranka, amniga iyo arrimo kale.
“Doorashadan muhiim ayay u tahay dhismaha Soomaaliyada cusub ee dimoqaadiga ah. Sidaa darteed waxa alagama maarmaan ah inaan wax walba oo fiican u hurno. Waxaa dhammaanteen naga go’an in doorashada ay qabsoonto waqtiga loogu talagaley’’, ayuu yiri Madaxweynaha oo maanta ka hadlay shirka.
Kulankaasi kadib ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxda madasha iyo wakiillada beesha caalamka waxay kulan la yeesheen guddiga u qaabilsan qoondada haweenka ee matalaadda goleyaasha qaranka oo ay iska soo qaadeen xaqiijinta kuraasta ay haweenka helayaan doorashada dhaceysa sannadkan 2016-ka.
Codbixinta Aftida Britain ee Midowga Yurub oo Billaabatay
Wafti ka Socda IGAD iyo Ethiopia oo tagay Beledweyne